ubusazi ukuba yeyiphi irekhodi lehlabathi lefowuni ende kakhulu?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi ukuba yiyiphi irekhodi lehlabathi leyona fowuni inde?
Ngaba uyazi ukuba yiyiphi irekhodi lehlabathi leyona fowuni inde?
Namhlanje, incoko yomndilili wefowuni ihlala okwemizuzu nje embalwa, kwaye xa sijonga indlela ezenzeka ngayo, sinokucinga ukuba iifowuni ziya kuba mfutshane kule minyaka izayo. Kodwa kwangaxeshanye, kusekho abantu abathanda ingxoxo esempilweni kwaye banokuthetha emnxebeni iiyure. Abantu esiza kukuxelela ngabo ngabakeli qela lamva. Yeyiphi eyona & apos; ngaphezulu, bayaziwa ukuba babeke ezinye zeefowuni ezinde kakhulu ezakhe zabonwa lihlabathi. Ke yeyiphi irekhodi lehlabathi leyona fowuni inde?
Yeyiphi eyona fowuni inde yakha yathathwa?
Ngo-2012, uEric R. Brewster kunye no-Avery A. Leonard weYunivesithi yaseHarvard babamba umnxeba ngeyure ezimangalisayo ezingama-46, imizuzu eli-12, imizuzwana engama-52, kunye nee-millisecond ezingama-228. Aba bafundi babini bavunyelwe ukuba bayeke ukuthetha ngaphezulu kwemizuzwana eli-10, kodwa banikwa ithuba lokuphinda babuyise amandla abo ngekhefu lemizuzu emi-5 ngeyure nganye abayichithe kwifowuni. Oku bekungaphezulu kwengxoxo ende ende engaqhelekanga. Yayingumboniso-ufakelo lobugcisa bokusebenza kwabadlali abatsha ababambisanayo ababizwa ngokuba yiHarvard Generalist. Abantu bavunyelwe ukuba babukele incoko kwaye basebenzisane no-Eric no-Avery, yiyo loo nto izihloko ezitsha ezinokukhuthaza.
Kodwa kwiminyaka embalwa ngaphambili, ngo-2009, uSunil Prabhakar wehla embalini ngerekhodi yomnxeba eyayibaluleke ngakumbi yeeyure ezingama-51. Nangona kunjalo, wayengenalo iqabane elinye lokufowuna ngelixa wayeka irekhodi. Uqale ngokubiza uGqr K. K. Agarwal, ugqirha weCardiologist owaziwayo, owathi kamva wadlulisela umnxeba kwabanye.
Umdlalo owaziwa ziiRekhodi zehlabathi zeGuinness wenzeka eRiga, eLatvia, apho incoko yefowuni yathatha iiyure ezingama-56 kunye nemizuzu emi-4. Oku kwenzeke emva ngo-2012 kumsitho oququzelelwe zii-Tele2 zonxibelelwano kunye ne-SponsorKing. Ingxelo ibibekwe ngamaqela amabini, uKristaps Štãls edityaniswe noPatriks Zvaigzne kunye noLeonids Romanovs bethatha inxaxheba kunye noTatjana Fjodorova, owayethetha ngayo nantoni na ukusuka kwi-aquariums ukuya kwi-social dynamics ukuya engqondweni.
Yeyiphi eyona fowuni inde inakho ukuba ukhe ube nayo? Sazise ezantsi kwizimvo!
izikhombisi: IHarvard Crimson , Thetha ngeTelecom , Iirekhodi zehlabathi zeGuinness
Ishaja ekhawulezayo ye-iphone 11 pro
Samsung notebook 4 umhla wokukhutshwa
Isamsung ibandakanya i-3 yeminyaka ubudala ehlaziyiweyo ye-Galaxy Note 3 kuluhlu lwayo lweeNtengiselwano zoMnyama ngoLwesihlanu
I-Apple iPhone 12 Pro / Max vs iPhone 11 Pro / Max
IMotorola DROID Turbo 2 vs Samsung Galaxy Note5 vs Apple iPhone 6s Plus: ukuthelekiswa kwe-specs
Jonga ukuthengisa kwe-T-Mobile 5G eyayingavunyelwanga kwi-Super Bowl
Iimpawu ezintsha ze-iOS 14: ungayitshintsha njani iSafari yeChannel njengesikhangeli esingagqibekanga